union life insurance company ltd(union life insurance company ltd) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको एजीएमबाट ६ सञ्चालक निर्वाचित, अध्यक्षमा शुलभ अग्रवाल चयन
काठमाण्डौ। युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारणसभा आज भैरहवामा सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक साधारणसभाले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नुका साथै नयाँ सञ्चालक चयन गरेको छ। सभाले कम्पनीको संस्थापक समूहतर्फ शुलभ अग्रवाल, सन्दीपकुमार अग्रवाल, जीवनकुमार अग्रवाल र सीमा गोल्छा तथा सर्वसाधारण समूहतर्फ...
युनियन लाइफको सेयरभाउ बढेमा रु. १०००सम्म पुग्नसक्ने, इचिमोकुमा देखियो खरिदको अवसर
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत नयाँ बीमा कम्पनीमध्ये युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका विषयमा धेरैले चासो दिन थालेका छन्। यो कम्पनी २०७४ मा स्थापना भएको हो। कम्पनीका देशभर ५० वटा शाखा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि शाखा विस्तार गर्ने कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ। स्वास्थ्य बीमा व्यवसायमा...
काठमाण्डौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रत्येक तीन वर्षमा अग्रिम रुपमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी नवीनतम प्रकारको ‘जीवन उत्थान बीमा योजना’ सार्वजनिक गरेको छ। बीमा समितिबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको सो योजनाबाट बीमा गर्ने व्यक्तिहरुले अधिक लाभ लिन सक्ने देखिएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको जीवन बीमा उत्थान बीमा...
युनियन लाइफले ल्यायो ‘जीवन आवरण बीमा योजना’, यस्ता छन् सुविधाहरु
काठमाण्डौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नयाँ विशेषतायुक्त प्रकारको जीवन आवरण बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीले बीमा समितिबाट उक्त योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। कम्पनीले यस योजनामा बीमा गर्नेहरुका लागि विविध सुविधाहरु उपलब्ध रहेका छन्। बीमा गर्ने ब्यक्ति बीमाअवधिसम्म जीवित रहेमा बीमांक रकम र...
काठमाण्डौ । हालै आईपीओ बिक्री गरी बाँडफाँड गरेको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर आज सोमबारदेखि धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आएको छ। स्पेसल प्रि–ओपन सेसनमा आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तोकेको ओपनिङ रेन्जभित्रै सेयर किनबेच भएसँगै युनियन लाइफको सेयर नियमित समयका कारोबारमा आएको हो। युनियन लाइफ इन्�...
भोलिबाट मनकामना स्मार्ट र युनियन लाइफको सेयर कारोबारमा आउने, ओपनिङ रेन्ज कति ?
काठमाण्डौ । हालै आईपीओ बिक्री गरी बाँडफाँड गरेका मनकामना स्मार्ट लघुवित्त र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर भोलि सोमबारदेखि धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) आज आइतबार यी दुवै कम्पनीले सेयर सूचीकरण सम्झौता भएको छ। कुनै पनि कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकरण भएको दोस्रो दिनबाट...
आगामी साताबाटै युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबारमा ल्याउने तयारी
काठमाण्डौ । भर्खर आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिएको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर आगामी साताभित्रै धितोपत्र दोस्रो बजारमा ल्याउने गरी प्रक्रियाहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको छ। आईपीओ निष्कासन गरेको एक साताभित्रै बाँडफाँड गरिएको युनियन लाइफको सेयर आगामी साताभित्रै कारोबारमा ल्याउनका लागि धितोपत्र बिक्री...
काठमाण्डौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ आज बिहीबार बाँडफाँड भएको छ। आईपीओ बिक्री गरेको तेस्रो दिनमै युनियन लाइफको आईपीओ बाँडफाँड गरिएको हो। आज साँझ ५ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा आयोजित एक कार्यक्रमबीच युनियन लाइफ आईपीओको बाँडफाँड गरिएको हो। गत असार २४ गतेदेखि असार २८ गतेसम्म बिक्री खुला...
आजै हुनेछ युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड
काठमाण्डौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ आज बिहीबारै हुने भएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार आज राति अबरेसम्म युनियन लाइफको आईपीओ बाँडफाँड हुनेछ। ‘प्रिअलटमेन्टको सबै काम सकिएको र आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भएकोले आजै जसरी भए पनि आईपीओ बाँडफाँड गर्नुपर्छ’, प्रभु क्यापिटलका एक...
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा बन्यो आवेदनको नयाँ कीर्तिमान, कतिले भरे ?
काठमाण्डौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आवेदनको नयाँ कीर्तिमान बनेको छ। यो आईपीओमा हालसम्मकै सर्वाधिक आवेदन परेको हो। आज आवेदन दिने अन्तिम दिन सोमबार साँझ ५ बजेसम्म २१ लाख ७२ हजार ८६८ आवेदन परेको धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ। यो हिसाबले यो आईपीओमा परेको आवेदनले यसअघि...
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ भर्नु भयो ? आवेदन दिने आज अन्तिम
काठमाण्डौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज असार २८ गते अन्तिम दिन रहेको छ। यो कम्पनीले गत असार २४ गतेबाट ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। आज बैंकिङ समयपछि आवेदन बन्द गरिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले जनाएको छ। कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमध्ये ३०...
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा अहिलेसम्म कति पर्यो आवेदन ?
काठमाण्डौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आइतबारसम्म ४.५६ गुणा बढीले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। यो कम्पनीले गत असार २४ गतेबाट ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमध्ये ३० प्रतिशत रकमबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको हो। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित...